तानसेनमा खानेपानी हाहाकार, माहामारीमा पानी खाेज्नै मुस्किल ! - Sero Fero News
तानसेनमा खानेपानी हाहाकार, माहामारीमा पानी खाेज्नै मुस्किल !
मिलन विश्वकर्मा, पाल्पा
जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। विगत १५ दिनदेखि खानेपानीको हाहाकार भएको हो। घरका धारामा पानी आउन छाडेको छ।
कोरोना महामारीका बेला खानेपानीको समस्या हुँदा उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्। पानी खोज्न जाँदा कोरोना सर्ने हो कि? भन्ने पिरलो छ यहाँका स्थानीयलाई। बजारबासी अहिले घण्टौ लगाएर पानी बोकेर खान बाध्य भएका छन्। उनीहरूले बजारभन्दा टाढा रहेका बन जंगलका मूलमा धाएर पानी बोकेर ल्याउने गरेका छन्। बजारभित्र रहेका मूलमा समेत मानिसहरूको दिनभर भीड लाग्ने गर्दछ।
आफूले नारायणस्थामा रहेको धाराबाट पानी बोकेर ल्याउने गरेको कैलाशनगर बस्दै आएका लालबहादुर गुरुङले बताए। उनी बस्ने र पानी बोक्ने धारा झण्डै एक किलोमिटर टाढा छ। ‘धारामा पानी सानो आउँछ। पानी भर्न पालो कुर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘ग्यालीन र बोत्तलमा पानी भरेर कोठामा आउँदा तीन घण्टा बित्छ।’ पानी भर्न धारामा पुग्दा आफूलाई कोरोना सर्ने हो कि? भन्ने डर लागेको गुरुङले गुनासो गरे।
मन्दिरको पेटीमा बसेका मेहल्धाराका लक्ष्मीहरि पौडेलले डेढघण्टासम्म पानी भर्न पालो नपाएको बताए। एकहप्ता देखि घण्टौसम्म कुरेर यहाँको धाराबाट खानेपानी लैजानु परेको बाध्यता उनले सुनाए। पानी भर्नेको भीड भएकाले कोरोना सर्ने चिन्ता उनलाई पनि छ। ‘घरमा पानी छैन्। धारामा आउँदा मान्छेको भीड छ’, उनले भने, ‘हामीलाई नै बचाउन गरिएको निषेधाज्ञाको बाध्य भएर उल्लंघन गर्नु परेको छ।’ कोरोना सर्ने चिन्ता लागेको उनले बताए।
रामपुर नगरपालिका ९ घर भई अध्ययनको लागि तानसेनको बडिज्ञानटोल बस्दै आएकी विद्यार्थी तारादेवी दिशुवाको पनि चिन्ता पानी कै छ। पानी नभई पनि नहुने। धारामा ल्याउन आउँदा कोरोनाको जोखिम उत्तिकै छ। यस्तो महामारीका बेला खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकाय उदासिन भएको उनी बताउँछिन्।
यहाँ प्रत्येक दिन विहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म पानी भर्नेको भीड लाग्छ। साना बालबालिकादेखि वृद्धसम्म यस धारामा खानेपानी ल्याउन आउँछन्। कतिपयले माक्स प्रयोग गरेका हुँदैनन्। प्रायः धारामा आएका बालबालिकाले मास्क प्रयोग गरेका हुँदैनन्।
खानेपानीका कारणले तानसेनमा कोरोना महामारी बढ्न सक्ने खतरा रहेको असनटोलका सन्दीप पाण्डेले बताए। १५ दिनसम्म पनि खानेपानीको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनले माग गरे। यस्तो महामारीका बेला समितिका पदाधिकारीले मानिसको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने काम गरेको आरोप लगाए।
जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको तानसेन बजारमा विगत १५ दिनदेखि खानेपानी आएको छैन्। भुल्केको मूलमा रहेको पानी तान्ने मोटर बिग्रेर पानी नआएको तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव केशव पौडेलले बताए। समयमा मोटर मर्मत गर्न नसकेको उपभोक्ता समिती उल्टै विद्युत प्राविधिकरणलाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ।
विद्युत आपूर्तीमा अनियमितता हुँदा मोटरले पानी तान्न नसकेको उनले बताए। ‘भुल्केस्थित मूलमा रहेको बिग्रिएको मोटर झिकेर नयाँ राखेका छौं’, उनले भने, ‘अबको तीन दिनभित्र पहिलाको समय तालिकाअनुसार धारामा पनी आउँछ।’ विद्युत नियमितताको लागि सबैले दवाव दिनुपर्ने पौडेलले बताए।
पानीका मूलमा रहेका मोटर समयमै मर्मत भए जेनतेन पानी खान पाइने उपभोक्ताको भनाई छ। उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले लापरबाही गर्दा तत्काल समस्या समाधान नहुने र उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरेको सरोकारवालाको ठम्याई छ। thahakhabar